ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Roses ၏ထူးခြားသောလက်ဆောင်ပေးမယ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 03 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲသွားပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်ရဲ့ 10 နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဆင်နွှဲ, သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်မင်္ဂလာအဆိုပြု, နှင်းဆီပန်းဆိုရင်ခုန်စရာအခါသမယကိုဖြည့်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်. နှင်းဆီပန်း၏လက်ဆောင်ကိုပေးလှူသူကယ့်ကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အထင်ကြီးနိုင်ကြောင်းကြော့ရှင်းနှင့်အတန်း၏လူတယောက်သည်စွဲမှတ်ပေးပါသည်. စုံတွဲများရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာနှင်းဆီပန်းဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်သူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုဖော်ပြခဲ့ကြ. သို့သော်, ထိုသို့သောဘုံဆုဖြစ်၏ကြောင့်, သင်နှင်းဆီပန်း၏ပူဇော်သက္ကာကိုထူးခြားတဲ့စေနိုင်ပုံသို့နဲနဲပိုပြီးအတွေးထားရန်လိုပေမည်. သင့်ရဲ့နေ့စွဲတို့မျက်မှောက်၌ cliche ရှာဖွေနေ၏အန္တရာယ်ကိုမ run ပါနဲ့; သင့်ရဲ့လက်ဆောင်အချို့ဖန်တီးမှုအတွေး add. နှင်းဆီပန်း၏ကြော့ရှင်းပေးသေးနေဆဲဆုလက်ဆောင်ဖန်တီးမှုစေရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်:
1. စာနှင့်အတူ Roses
လက်ဆောင်အဖြစ်နှင်းဆီပန်းပေးစေခြင်းငှါတဦးထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းကတော့သင့်ရဲ့နှင်းဆီပန်း၏ Petaling အပေါ်တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုချပြီးအားဖြင့်ဖြစ်တယ်. တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲဘို့သင့်ကိုတစ်ဦး flirty '' ဟေ့ Cutie ရှိသည်နိုင်’ ထို Petaling ပေါ်မှာရေးထားတဲ့သို့မဟုတ်, ထိုကဲ့သို့သောနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ်ရင်ခုန်စရာအချိန်များအတွက်, သင်တို့သည်ငါချစ်ရှိသည်နိုင်’ ကျမ်းစာ၌လာသည်. သင်သည်အပင်သင်သည်ငါ့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားတော်မူမည် '' ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်?’ တစ်မူထူးခြားသောအဆိုပြုချက်ကိုနည်းလမ်းအဖြစ်နှင်းဆီအပေါ်.
မူးယစ်မှုပေါ်၌ပန်းရောင်းရ (ပင်အချို့သောရတနာအရောင်း) ရွှေခွက်များကိုပြင်ဆင်ကြ၏ဖြစ်ကြောင်းနှင်းဆီပန်းရောင်းလိုက်မည်. ဒီသင် bit နဲ့တဒါဇင်ကျော်ပုံမှန်နှင်းဆီပန်းကုန်ကျမည်နေစဉ်, တစ်ခုတည်းကိုရွှေနှင်းဆီကသင့်လက်ဆောင်နက်ရှိုင်းသောအချစ်ဇာတ်လမ်း၏အဆင့်တခုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်များကိုပြင်ဆင်, တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖော်ပြခြင်းမ. ရွှေတခုထပ်ပေါင်းထည့်အကျိုးကျေးဇူးနှင်းဆီတစ်ပုံမှန်နှင်းဆီထက်အများကြီးပိုရှည်ကြာရှည်ခံသည်များကိုပြင်ဆင်. နှင်းဆီပန်းပုံမှန်အားဖြင့်မိမိတို့အဘို့ရွှေအထူး sparkle နှင့်အတူလတ်ဆတ်ဖြတ်နှင်းဆီပန်း၏လေ့လာကြည့်ပေးစေခြင်းငှါရွှေ enameled များကိုပြင်ဆင်ကြ၏နေကြတယ်.
အမျိုးသမီးများစွာ (လွန်းနှင့်အချို့သောယောက်ျား) လုနီးပါးလောက်သူတို့ချောကလက်ချစ်ပန်းပွင့်ကိုချစ်. အဘယ်ကြောင့်ချောကလက်နှင်းဆီနှင့်အတူတစ်ဦးနှစ်ဦးကိုလက်ဆောင်တွေမပေး! အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ချောကလက်နှင့်သကြားလုံးဆိုင်များမကြာခဏအထူးအခါသမယလက်ဆောင်ထူးခြားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီချောကလက်ရောင်းချ. သူတို့အားပုံစံမျိုးစုံတစ်ယောက်ကတစ်ခုတည်းနှင်းဆီ၏ပုံစံအတွက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်. သင်သည်ထတချောကလက်ကိုဝယ်ယူဒါမှမဟုတ်သူတို့အစစ်အမှန်နှင်းဆီပန်းတစ်ပန်းစည်းလျှင်တစ်ခုကဲ့သို့တစ်ဒါဇင်ဝယ်သူတို့ကိုစီစဉ်နိုင်. သင့်ရဲ့နေ့စွဲသူမကချောကလက်ချစ်သောသူမည်သည် (သို့မဟုတ်သူ) ကြမည်မှာသေချာပါသည်အံ့သြဝမ်းသာဖြစ်လိမ့်မည်.
4. တစ်ဦးကနှင်းဆီအဆိုပါလူစုလူဝေး မှစ. အထဲကရပ်သွား
သင်ကတစ်ဒါဇင်နှင်းဆီပန်း၏အစဉ်အလာလက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, သို့သော်ထိုအပိုဖန်တီးမှုအသွင်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုတဲ့, သင့်ရဲ့ပေါ်၌ပန်းရောင်းရမှသွားနှင့်တစ်ဦးကိုဝယ်ယူရန် 11 အနီရောင်နှင်းဆီပန်း, နှင့် 1 သီးခြားစွာရောင်စုံနှင်းဆီ. နှင်းဆီပန်းအရောင်မျိုးစုံအတွက်လာဒါတစ်ခုတည်းနှင်းဆီအထံတော်မှထွက်ရပ်ကွာခြား၏လုံလောက်ပါတယ်သေချာစေနိုင် 11 အနီရောင်နှင်းဆီပန်း, ဒါပေမယ့်အရောင်ကအခြားနှင်းဆီပန်းနှင့်အတူတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မပါဘူး. သင်သည်သင်၏ပန်းစည်းကယ်နှုတ်တော်မူသောအခါ၎င်းတို့၏အံ့သြဖွယ်အလှတရားကိုသူတို့လူအစုအဝေး၏ကျန်တော်မှထွက်ရပ်အနီရောင်နှင်းဆီပန်း၏အုပ်စုထဲကရွေးထားသောတစ်ခုတည်းသောအဆင်းလှနှင်းဆီသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အတွက်အထူးဂုဏ်အသရေသင်္ကေတကြောင်းကြောင့်သင့်ရဲ့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြ.
ဤနှင်းဆီပန်းကိုသင်ဆုလက်ဆောင်ကိုသင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားအပေါ်ပိုမိုအားကောင်းရိုက်ချက်ရှိသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါလေးခုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်. နှင်းဆီပန်းတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်သင်ချစ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအထူးအခါသမယဂုဏ်ပြုရန်အံ့သြစရာလက်ဆောင်ဖြစ်ပါ၏နေစဉ်, အဲဒီစိတ်ကူးစိတ်သန်း၏တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အချို့သောတီထွင်ဖန်တီးမှုထည့်သွင်းသင်ပိုကောင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင်၏အသက်တာပေါ်ခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အစောင့်ရှောက်ဘယ်လောက်အလေးအနက်ဖော်ပြဘယ်သို့ထူးခြားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသကူညီပေးပေမည်. ဒါ့အပြင်လာရန်နှစ်အဘို့ဘဏ္ဍာကိုမှသင်ချစ်တဦးတည်းအတွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပျော်ရွှင်မှတ်ဉာဏ်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်.
အွန်လိုင်းမှာချိန်းတွေ့, Conversation ဆွေးနွေးတိုင်ပင် 100% အောင်မြင်ခြင်း